नयाँ शक्तिको सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण हुँदै, विभाग प्रमुख खतिवडा भन्नुहुन्छ – ‘रेस्पोन्स राम्रो छ’ | नयाँ शक्ति नेपाल
नयाँ शक्तिको सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण हुँदै, विभाग प्रमुख खतिवडा भन्नुहुन्छ – ‘रेस्पोन्स राम्रो छ’
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले अहिले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य जनतामाझ पुर्‍याउन विभिन्न प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन र गोष्ठीको आयोजना गर्दै आएको छ ।
पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य र वैकल्पिक राजनीतिबारे बुझाउन पार्टी प्रवक्ता एवं प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको टोली अहिले सात वटै प्रदेशका युवालाई प्रशिक्षण दिन प्रदेश भ्रमणमा निस्केको छ । टोलीले प्रत्येक प्रदेशमा दुई दिने प्रशिक्षण दिनेछ । टोली अहिले ३ नम्बर प्रदेशको २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सकेर ४ नम्बर प्रदेशमा छ ।
पार्टी निर्माण गर्नुको अर्थ र आगामी गन्तव्यको बारेमा जनतालाई बुझाउने उद्देश्यले सातवटै प्रदेशमा प्रशिक्षणको कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभाग प्रमुख खतिवडाले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पार्टी नयाँ पार्टी हो, अन्य पार्टीको जस्तो लामो स्कुलिङ छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टी किन बन्यो ? कसरी बन्यो ? कस्ता विषय, एजेन्डाहरु पार्टीले उठाउनुपर्छ ? भन्ने कुरा आन्तरिक पार्टी पंक्तिलाई वैचारिक रुपमा प्रष्ट पार्ने प्रशिक्षण कार्यक्रमको लक्ष्य हो । हामी बाह्य रुपमा भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा लागेका छौं ।’
‘हामीसँग अहिले भएकै संगठनले त पार्टी बलियो बनाउन पुग्दैन । नयाँ मान्छे थप्न पनि एकरुपता चाहिन्छ । त्यसको लागि पार्टीको आन्तरिक पंक्तिलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले विचार र दीर्घकालीन लक्ष्य जनतामाझ लैजान र नयाँ सदस्यहरुको आगमनको लागि पनि हाम्रो प्रशिक्षणको उद्देश्य हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
रेस्पोन्स राम्रो छ, मूल्याङकन गर्ने समय भएको छैन
विभाग प्रमुख खतिवडाले आफूहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रमबाट पार्टीका शुभचिन्तक प्रभावित भएको भन्दै सबैमा वैकल्पिक पार्टी निर्माणको लागि आत्मविश्वास चाहिने जोड समेत दिनुभयो । ‘नेपालमा वैकल्पिक पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । त्यसमा सहमति देखिएको छ, साथीहरु खुशी हुनुहुन्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्टले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । यी पार्टीहरु केही वर्षमा नै पतन हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले नयाँ शक्तिलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा विकास गर्नुबाहेक कुनै विकल्प हामी देख्दैनौं । त्यो स्पिरिटको साथ हामी लागेका छौं । त्यसैले मुलुकलाई आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन भएको हेर्न चाहनेहरुमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि आत्मविश्वास चाहिन्छ ।’
पार्टी प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख खतिवडाले नयाँ शक्ति संगठन विस्तारकै क्रममा रहेकाले मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएकोसमेत बताउनुभयो । ‘नयाँ शक्तिले अहिले संगठन विस्तार र संगठन सुदृढीकरणका साथै अन्य कार्यक्रमहरु मतदातामाझ लैजाँदै छ । पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमा नै हामीले विभिन्न उतारचढाब झेल्नुपर्‍यो । दुनियाँमा भएको प्रयासलाई नै हामीले पनि प्रयोग गर्न खोजेको हो । कहीँ नभएको चमत्कार हामीले गर्न लागेका होइनौं । त्यसैले मान्छेहरुले के भन्छन् भन्ने कुरा ठूलो होइन । नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ कि छैन ? भन्ने मुख्य प्रश्न हो । नयाँ शक्तिलाई अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने समय भएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।